Samachar Batika || News from Nepal » ६ महिना पानीमा डुब्दा नबिग्रेको आइफोन! ( भिडीयो सहित)
६ महिना पानीमा डुब्दा नबिग्रेको आइफोन! ( भिडीयो सहित)
एक क्यानाडियन नागरिकले ब्रिटिस कोलम्बियास्थित तालबाट ६ महिनासम्म डुब्दा पनि नबिग्रेको आइफोन फेला पारेका छन्। पेसागत रुपमा पानीको सतहमा पौडी खेल्ने डाइभर क्लेटन हेल्कनबर्गले क्यानाडाको ह्यारिसन तालबाट आइफोन ११ भेटाएको एप्पल इन्साइडरले उल्लेख गरेको छ।
बिहिबार सार्वजनिक भएको एक भिडियो मार्फत् क्लेटनले आइफोन ११ पानीको सतहबाट निकाल्दा राम्रोसँग चलेको बताएका थिए।
उनका अनुसार श्रीमति हेथरसहित उनी तालमा फालिएका सामानहरु निकाल्न गएका थिए। त्यही क्रममा अन्य थुप्रै वस्तुमध्ये एउटा फिल्प फोन र आइफोन ११ भेटिएको थियो। फिल्प फोन पानीले गर्दा बिग्रिएको थियो भने आइफोन राम्रो अवस्थामा थियो।
‘आइफोन ११ नबिग्रिएकोले मैले घर लगेर सफा गरे र केहीबेरमा नै फोन खुल्यो,’ क्लेटनले भने, ‘सो आइफोनको माइक्रोफोन र स्पिकरमा केही समस्या देखिए पनि पानीले बिगारेको देखिएन।’आइफोनमा सिम हालेर क्लेटनले त्यसको मालिकलाई फोन गरेर जिम्मा लगाएको एप्पल इन्साइडरले जनाएको छ।
आइफोनका मालिक फतेमेह घोडसीका अनुसार गत सेप्टेम्बरमा उनी ह्यारिसन तालमा डुंगा चलाउन आएका बेला उनको फोन पानीमा खसेको थियो। त्यसबेला तालमा आइफोन खोज्न नसक्ने बताएपछि उनी निराश भएर घर फर्केका थिए।फतेमेह घोडसीले आफ्नो आइफोन हराएको ६ महिनापछि सकुशल हातमा पाउँदा विश्वास नभएको बताएका थिए।
आइफोनको पानी प्रतिरोध फिचरले केही समय थुप्रै चर्चा पाइरहेको छ। सन् २०२० को फ्रेबुअरीमा एक आइफोन प्रयोगकर्ताले आफ्नो आइफोन पानीमा खसेको दुई महिनापछि पनि राम्रो अवस्थामा भेटाएका थिए।
प्रकाशित मिति २३ फाल्गुन २०७७, आईतवार ०६:४५